DEG DEG: War deg deg ah oo naga soo gaaray magaalada Boosaaso | PuntlandTimes-	Wednesday, February 22nd, 2017	Home
DEG DEG: War deg deg ah oo naga soo gaaray magaalada Boosaaso
Jan 11, 2017 - 1 Jawaab	Waxaa Qoray: Mohamed Yusuf Yasin on January 11, 2017.
BOOSAASO(P-TIMES)- Wararka naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in goor dhaw halkaas lagu dilay labo qof rag ah, ayna dilkooda fuliyeen Dabley Bistoolado ku hubeysan oo ka baxsatay goobta dilkan ka dhacay.
Boosaaso hadda waxaa jooga Madaxda ugu sareysa dawladda Puntland, waxaana horey loogu dilay masuuliyiin katirsan dawladda Puntland todobaad gudihiis sadex masuul.
Ciidamada Puntland ayaa si aad ah u sugaya xaaladda amniga ee magaalada Boosaaso, waxayna qabteen dad badan oo ilaa hadda baaris lagu hayo.
Abdiweli says:	January 11, 2017 at 8:36 pm	Hadii aan magalada guri guri loo baarin lama sugi karo amanka. Waayo dableydu guryo ayey kasoo duulaan, ka cunaan oo ka caban.guryahaana reer puntland ayaa leh. Amaan xumada waxaa keenaya qabyaalada oo la qadarinayo. Dowladu waxay ka baqaysaa qabilada oo qabiilkii falxumatashiilkooda lasoo qabto way caroon oo gadoodin oo buuraha ayeey galin. Reer puntland qabyaalad qaab daran ayaa hareereeyey oo rabi iyo xaqsoorba ka fogeeye . Hadii aan qabyaalada xaqdarad iyo xaqiraada ku dhisan layska deyn oo aan gacan ku dhiiglayaasha Kan ugusokeeya soo qaban ama soo sheegin hade hala ogaado in roob da’aheeyn. … guuldaro-na reer puntland ku dambayn… horumar-na la gaareyn. WBT